Ekpere ịre ụlọ. ? Saint Joseph na Chukwu Pai
Ekpere ka ere ulo. Ichebara ekpere n’arịrịọ na omume niile a na-ewetara anyị kwa ụbọchị dị ezigbo mkpa. Yabụ na anyị chọrọ otu ekpere i re ụlọ Anyi aghaghi ima otu ichoro ka ahuruo ahihia iji mee.
E nwere ekpere maka ihe niile anyị chọrọ ma resị ụlọ bụ, n’enweghị mgbagha, usoro nke anyị chọrọ nduzi nke ịdị adị kachasị elu nke na-eduga anyị ime mkpebi dị mma ebe ọ bụ na agaghị eleda ya anya.
N’ekpere, anyi ga achoputa udo na amamihe, ihe anyi choro ka anyi mee ihe oma.
1 Ekpere bu ire ulo siri ike?
1.1 Ekpere San José ịre ụlọ
1.2 Ekpere ka ere ulo ire
2 Enwere m ike ikwu ahịrịokwu abụọ ahụ?
Ekpere bu ire ulo siri ike?
Ekpere di ike, na-agbanyeghị ebe ị na-eme ya ma ọ bụ oge, ekpere ga-abụ ngwa ọgụ anyị kachasị mma na ngwá ọrụ ga-enyere anyị aka ịchọta ụzọ ọ bụla n'ọnọdụ ndị ahụ ebe anyị chere na ọ dịghị.
Ọ bụkwa kpom kwem n'ọnọdụ ndị a siri ike ebe ekpere kacha sie ike.
Ire ụlọ nwere ike inwe nsogbu ụfọdụ, ọtụtụ oge ọ dị mkpa ịre ọsọ ọsọ ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnweta onye nwere ezigbo mmasị nke chọrọ ịzụta ụlọ ahụ, n'ọnọdụ ndị a, ọ dịghị mma karịa ekpere iji nwee ike ree ya n'oge ndekọ.
Onweghi ihe ekpere na-apughi ime.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ megidere, ihe a na-achọ bụ iresị onye na-enye ya nlekọta anyị ga-enye ya, ebe ọ bụ na ụlọ ahụ nwere nnukwu mmetụta dị mma, mgbe ahụ ịchụ onye na-azụ ahịa na-esiwanye ike.
Ekpere nwere ike ime ka onye na-azụ ahịa anyị tụrụ anya na ọ pụta, nke ahụ kwekọrọ na ọnụahịa ahụ ma na-enye ụlọ ahụ nlekọta na ekele dị mkpa iji zere mmebi ya.
Cingtinye okwukwe niile n'ike nke ekpere ga - enye anyị ike nke iji chere maka ọrụ ebube nke anyị chọrọ.
Ekpere San José ịre ụlọ
Ewoo, Saint Joseph, onye dị ịtụnanya, Gị onye Onye-nwe-anyị kuziri ọrụ onye nlekọta ụlọ ọrụ, agwara na ekwenyero gị na ebighi ebi, gee ntị n'ihe m na-ekwu.
Achọrọ m ka ị nyere m aka ugbu a Otu i si nyekwa aka nwa gị nwoke dị ka Jizọs, Dịkwa ka gị na ọdịbendị gị na ọrụ gị O nyeerela ọtụtụ ndị ọzọ aka obibi. Achọrọ m ire nke a (ụlọ a kpọrọ aha ma ọ bụ ihe onwunwe) Na ngwa ngwa, mfe ma baa uru.
Ana m arịọ gị ka ị chọọ ịbịakwute ezigbo onye ahịa, isnye dị njikere, nke ahụ na -eme ma bụrụkwa ezigbo mmadụ, me nabatakwa m na ọ nweghị ihe na-akwụsị ịre ahịa ngwa ngwa.
Ezigbo Saint Joseph, amaara m na ị ga-abụ nke a maka ebere nke obi gị Oge ya, ma ihe isi ike m hiri nne ugbu a Ọ ga-emerịrị ya ọsọ ọsọ.
Saint Joseph, aga m etinye onwe m n’ọnọdụ siri ike Ka isi m dochie ọchịchịrị M ga-atachi obi dịka Onye nwe anyị nabatara, Ruo mgbe a ga-edochi ụlọ (ihe ma ọ bụ ihe onwunwe) ahụ.
Anyị na-arịọ gị ka ị duzie ndị na-azụ ahịa dị mkpa, ka anyị wee nwee ike ịme nkwekọrịta dị mma maka akụkụ abụọ a, yana ozugbo enwere ike.
Ekem, Joseph Joseph, m gbara ya ndụ n’ihu Onye-nwe-anyị dị ukwuu na That ga-akpọkọta ekele m ruo mgbe ebighi-ebi, m ga-eburukwa aha gị dị nro n’elu egbugbere ọnụ m ebe ọ bụla m gara.
San José bụ Saint onye anyị ga-agakwuru maka ihe ndị a ebe ọ bụ dịka ọkwa ọkwa, maara uru ala na ụlọ nwere ike ịbara na ndụ anyị.
Talgwa ya okwu ga - enyere anyị aka ịchọta ihe anyị na - eche, cheta na ekpere nwere ike ma ọ bụrụ na, na mgbakwunye, anyị na - eme ya site na ịdị mma mgbe ahụ ọ na - akadị ike.
Anyị enweghị ike ịgakwute ndị senti a na-enwe obi abụọ ma ike ha ma ọ bụ arụ ọrụ ha mana, na ntụle, anyị ga-atụkwasị obi ma kwenye na nke ọ bụla n'ime ha nwere ike inyere anyị aka ịchọta ihe ọ bụla na-echegbu anyị.
La ekpere Saint Joseph ire ụlọ dị irè na ọrụ ebube.
Ekpere ka ere ulo ire
Nna Chineke, ekele m maka ịgọzi m n’ụlọ a. Daalụ maka obi ụtọ m natara n’aka ya n’afọ ole m bi ebe a. Gosi m ihe m kwesiri ime iji kwadebe ya maka orire.
M na-ekpe ekpere ka ụlọ m ree ngwa ngwa. Agaghị m atụ egwu ọbụla n’ime obi m n’ihi na ama m na inwere ikike iji zụta ya.
A na m arịọ gị ka inye m amara ime ihe n'eziokwu na ịghara ịdị anyaukwu n'ihe m na-arịọ.
Ama m na achọrọ m onye zụrụ ahịa ma jụọ gị ka iziga ya ngwa ngwa. Ekwere m nkwa inye gị dịka mmụba ị ga-esi n’ere a ga-eweta, sọpụrụ gị n’ahịa a.
M na-ekpekwa ekpere maka ebe ọhụrụ ị ga-akpọrọ m.
Kperem ka m doziem ka m nwee ike nwe nnukwu obi uto na udo n’ulo ohuru a, n’aha Jisos, ihunanya.
Ekpere iji nweta ezigbo ego mgbe ị na-ere ụlọ ga-agbapụta nke ọma site na ime anyị ruo na onye senti a na-agwa ya.
Ọ bụ ya mere akwadoro iji hichaa ụlọ anụ ahụ na nke ime mmụọ anyị chọrọ ire ya na ebumnuche iwepu ihe ọ bụla bụ ihe ọjọọ na-egbochi inweta ezigbo ọrịre na ire.
Enwere m ike ikwu ahịrịokwu abụọ ahụ?
Ọtụtụ mmadụ na-atụ egwu ikpe ekpere karịa ekpere. N'okwu a echegbula.
Nwere ike ma kpee ekpere ha abụọ ekpere enweghị nsogbu ọ bụla.
Ekpere obula iji ere ulo siri ike, aghaghi ikpee ya otutu mgbe ichoro.
Ihe dị mkpa bụ na ikwere na Chukwu na San José.
N ’otu a ka ndị nsọ abụọ a ga-esi nyere gị aka n’amara gị.